ह्याप्पी तीज - Vishwa News
११ भाद्र २०७६, बुधबार ० बिचार / प्रतिक्रिया
अच्युत सिग्देल / न्यूयोर्क
शनिवार सॉझ सिमसिमे पानीले कच्याक कुचुक्क परेका क्विन्सका गल्ली होसियारपूर्वक काट्दै अर्को राम्रो फेएरको पर्खाईमा थिएँ । पॉच मिनेट परबाट एउटा तिस मिनेटको रिक्वेस्ट ऑउछ। रेगुलर रेट र ४.४० रेटिङ, नाम – सबनम । विशाल जमैका एरियामा बाक्लिदो साउथ एसियन बस्तीबाट कुनै आफ्नै सहदेशी होला कि भन्ने सोच्दै पिकअप प्वाईन्टमा रोकिन्छु ।
रातो टल्किएको साडीमा धपक्कै बलेका सुनौला तिलहरी र राता हरिया पोते चमक्क चम्कन्दा, सँघारमा आएको तीजको रौसले यो अध्यारो बस्ती छिचोल्ने नेपाली नै भएको अनुमान गर्न गार्हो पर्दैन ।
अलि छिटो आउनु, धेरै नमात्नु, गहना ख्याल गर्नु भन्ने आदेशात्मक स्वर नेपथ्यमा सुनिन्छ। उबर एपमा तिन मिनेट बितिसक्छ । ‘क्यानसल ईट, ईफ प्यासैन्जर ईज नट सोईङ अप’ भन्ने मेसेज पपअप हुन्छ । ढोका खोलेर उभिएकी महिला र गाडीको दुरी दशमिटर होला तर तीन मिनेट जुत्ता लगाउँदैमा बिते जस्तो लाग्छ ।
सरी, लिलिट लेट भन्छिन। लुकिङ मिररमा आई कन्ट्याक बनाएर म “ईट्स ओ के” भन्छु । ऑखा जुध्छन् “नमस्ते” अभिवादन दिन्छु। सन्चै हुनुहुन्छ नि ? म फिस्स हॉस्ने प्रयास गर्छु, उनी मेरो हुलिया तर्फ आखॉ दौडाउँछिन । मेरो अभिवादन उनलाई सुदुर पूर्वेली भाषाको भेले जस्तो लाग्छ कि सायद । ४.९४ को मेरो रेटिङ र आई एम फ्रम टप अप दि वर्ल्ड । स्पिक्स – ईङ्लिस, नेपाली, हिन्दी र युन पोको स्पान्योलमा सायद आखॉ गएको छैन होला भन्ने ठान्छु। म एड्रेस भन्छु उनी “एस” भन्छिन् । म कुन रूट जाने सोध्छु । उनी फास्टर रूट बताउँछिन् ।
कसैको पर्सनल मामलामा नबोल्ने र पूर्ण व्यवसायिक र औपचारिकता निभाऊने कर्म स्वरूप विण्डसिल्डले फालेको आकासको दर्कने पानीको गातिमा म गाडि कुदाउँछु । २५ माईल मेक्सिममको रूललाई फलो गर्दा पनि खाल्डाखुल्टी जोगाउनु धेरै हम्मे पर्छ। लगातार पानी परेर ताल परेका सडकमा खिईएका टायरहरू सर्पको चालमा फिलिली नाच्छन् कयौं पटक ।
आई हर्ट रेडियोले आउँदै गरेको ग्रैमी अवार्डको नोमिनेसन हिट गीत नन् स्टप बजाई रहन्छ । मलाई मन पर्ने एड सेरिन र हिपहप क्विन नवोदित कार्डि बीलाई मन मनै शुभकामना दिन्छु। बच्चाहरूको आईडल निकोदोलियनबाट उदाएकी एरिना ग्रान्देको जीतको सम्भावना त्यतिकै छ ।तर मलाई उनी खास लाग्दिनन् । टेलर स्विफ्टको यू निड टु काल्म डाउनले जित्ने संभावना धेरै नै भए जस्तो लाग्छ। नेभिगेटर एप वेजले गाडी ग्राण्ड सेन्ट्रल पार्कवे छिचोलेर १० एक्जिट लिदै एलआईई एक्सप्रेस वे लान्छ। मेरो मौनता र भारी वर्षें झरीलो परिवेशले खिन्नतामा उभिएका न्याउरा सडक लाईटलाई उनका रसिला टेलीगफले तातो बनाउँछ।
उनी फटाफट दुईचार कल सकाउँछिन । साथीहरूको साडी गहनाको चर्चा गर्छिन सायद। प्रोसेको र सेतोनोदे पप र स्याम्पिएन फर्माईस सुनिन्छ । उनको अन्तिम कलले म एक्साईटेड हुन्छु । पार्टी सकिए पछि भेट्ने कुरा गर्दैछिन, म निर्क्योल गर्छु उताबाट केटा बोलि रहेको छ । रातको समय फोनको आवाज बाहिर नै प्रष्टिएको छ । आजकल बुढ़ाले शंका गर्न थालेकोले छोटो भेट तय हुन्छ सायद । हाम्रो पेशा पनि गज्जबको छ । अर्काको भान्सादेखि विस्तरासम्म र घर बजारदेखि अफिससम्मको नालीवेली सुनिदिनु पर्ने । यो भैया जेन्टल रहेछ राती यसैलाई लिन बोलाउँछु; उनले मलाई ईंगित गर्दै भनेको जस्तो लाग्छ। उनको फोन काटियो । उनी मसँग हिन्दीमा कुरा गर्न थालिन ।
मैले नियालेर मिररबाट उनको अनुहार हेर्ने प्रयास गरें । फोनको लाईटले उज्यालोमा चम्किएकी उनी लाम्चो मोहडा र बदामी ऑखा र अलि बाटूलो एैजेरू पलाए जस्तो फूली भएको नाक आर्य मँगोलको समिश्रण जस्तै रहिछन । अन्तराष्ट्रमा नेपालीको पहिचान सायद यस्तै छ। उनी म तिर पुलुक्क हेर्छिन् । पलभर ऑखा चार हुन्छन । उनी अलि अघि सर्छिन । उनको स्यानल परफ्युमले मगमगीले मन मुग्ध बनाउँछ ।
भैया आप बहुत ह्याड्सम हो । उनी तेल लगाउँछिन। फर्किने लिफ़्ट हो भन्ने मलाई बुझ्न कठीन पर्दैन । म हिन्दी टोनलाई पन्जावी टच दिएर “आप तो मनिषा कोईराला से भि अच्छि लगती हो” भनिदिन्छु । उनी फुरूङ पर्छिन उनी एकै सासमा बलिउड फ्यान भएको, खानहरू मन पर्ने, ईन्डिएन केटा मन पर्ने कुरा गर्छिन । म पनि नेपाली केटी विश्वमा सबैभन्दा राम्रा हुन्छन भनिदिन्छु । केरिङ सेयरिङमा नेपाली नम्वर वन, ईमान्दार र कर्तव्यनिष्ट विउटीफूल ईन एण्ड आउट । उनको अनुहारमा व्लसिङ छाउँछ । उनी पहेलो पूर्णिमामाको चन्द्रमा जस्तै छल्किन्छिन ।
करकापमा एरेन्ज मेरिज, सी सेक्सनबाट एक छोरा पाएको र श्रीमान् अली डफर जस्तो एज डिफेरेन्ट भएको। मनको कुरा नबुझ्ने, साथी भन्दा वोस बढि हुने, निर्देशात्मक र वोल्ड स्कूलिङ मनि सेयरिङ मेन्टालिटी । पार्टी मन नपराउने कन्जुस, समय नदिने । फेमेली फोकस्ड अलि ईन्डिपेन्डेन्सी नदिने कन्जरभेटिभ भएको बताउछिन। म मन मनै सोच्छु मान्छे किन आफूसँग भएको ख़ुशी भरपुर समेट्न सक्दैन? किन बैकल्पिक सपनामा बॉच्छ ? सायद मन भँवरा झै चन्चल छ, नयॉ र मनमोहकतामा आकर्षित हुन्छ।
उदास नदी जस्तै एकोहोरो झै बगेको उनको मुड मैले बिगार्न चाहिन । ज़िन्दगी नै अनुभव र एक रोडल कोस्टर एड्भेन्चर भएकोले समय बहावसँग बग्दै आफूलाई परिवर्तन गर्न जरूरी रहने कुरा बताएँ । नयॉ सभ्यता सँगै सँस्कार बदल्नु पर्ने रहन सहन र जीवन शैलीमा परिवर्तन हुन आवस्यक छ। जीवनस्तर उकास्न सोच र शिक्षा आवस्यक छ भने । शिक्षाले उनी हल्का बिच्किए जस्तो लाग्यो । मैले वातावरणलाई एउटै रफ्तारमा लाने प्रयत्न गरें । तिमी विजनेस वोमन हो ? भनेर सोधि दिएँ । उनी झन नज़िक आईन् । आफू भि भि आई पीकोमा वेवीसिटर गर्ने बताईन । रिपव्लिकन पार्टीको नेता, ठूलो मान्छे र व्यापारी छ । टिप्स, गिफ्ट प्रस्सत हुने र एक्ट्राले नै आफ्नो खर्च चल्छ भनिन।
त्यसैले आएको तीन चार बर्षमा नै जमैकामा घर किनेको । घर भाडाबाट राम्रो सेभिङ हुने र उनी बारम्वार आफूलाई ईन्डिपेन्डेण्ट उन्मुख रहेको बताउदै थिईन ।
मैले उनको श्रीमान प्रतिको बिकर्षणको कारण जान्न चाहे। यो डिभोर्स लिने मनोदशाको मुख्य जड नै सामान्य असमझदारी र स्पेस नदिने कारण हो। मैले बिवाह एक कम्परमाईजिङ र म्यूचुअल अण्डर स्ट्यान्डिङ हो भने।
दिल मागे मोर, पेप्सीकोलाको एड नै सहि कति व्यवहारिक नभएको तर्क सारें । सेयरिङ इनकम, एक्सपेन्सेज र रेस्पोन्सिबिलीटी । ज्वाईन्ट फेमेली र सौहाद्रताको वकालत गरें। उनी लाईफ़ एक बार पाईने हो । मनले चाहेको गर्न पाउनु पर्ने । आफ्नो कमाईमा बांच्न सक्ने भए पछि श्रीमानको कचकच कति सहने ? सामान्य सम्वन्धदेखि घर व्यवहार र ओछ्यानमा समेत डोमिनेट हुनु पर्ने कारणको उत्तर खोज्दै थिईन। सेल्फ़ ब्यालेन्स र सेल्फ़ डिसिजन मेकिङ र स्वतन्त्रतामा उनको जोड थियो। मैले स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दताको फरक सोधे । उनले टेक्निकल्ली एउटै भएको बताईन ।
उनको उद्देलित मनोदशालाई शान्त पार्न मैले गर गहना र साडीको तारीफ़ गरेँ । उनले आफूलाई यो पटक्कै मन नपर्ने जिकिर गरिन । नलगाए समाजले के भन्ला भन्ने डर । अनावस्यक खर्च र सामाजिक सँजाल र साथीसँगीको लहलही र लहड। कुनै कर्मकाण्डीले पार्वती र महादेवको कथामा समाजबाध्ने आधार स्वरूप सुरू गरेको लहलहै परम्परामा अडेको सांसारिक प्रदर्शनी र सो कल्ड सँस्कृती करकापमा धानिदिएको उनको तर्क थियो।
मैले तिम्रा ब्रतले श्रीमानको आयु बढ्छ रे हो ? प्रश्न गरें। उनले आजकलको केटीहरूको कम्तीमा दर्जन व्वाईफ्रेन्ड रहने र मेरो ब्रतले कुन चाँहिको आयू बढ्ने होला ? प्रतिप्रश्न गरिन। म हॉसे सायद उनको यो जोक थियो।
केटाहरू राडारले स्कानिङ सर्च गरेजस्तो राम्री केटीहरू छान्दै हिड्छन र मानसिक रूममा मानिस भन्ने जातको चरित्र नै भ्रष्ट भएको उनले थपिन् । हामी दुबै हॉस्यौ । उनले थपिन आप भि तो कम नहि है, लड्कि लोग फ्रष्ट ग्लिम्समे हि पता करती है । कौन कित्ना पानी मै है । म सम्हालिने प्रयास गरे । उनको आवाजसँगै बगेको तातो हावा मेरो कान नजिकै न्यानो बनाएर बत्तिदै थियो। फरासिली रहिछन् ।
डिस्टिनेसन आयो, मैले “ट्रिप एण्ड” गर्नु अगाडी उनले भरे लिन आउन अनुरोध गरिन । मैले घर फर्कदा बाटो पर्यो भने पस्छु भनें । मेरो प्रोफाईलबाट नम्बर लिईसकोको बताईन् । तर जाँदा जाँदै “सी यू भैया आप बहुत अच्छे हो” भनिन । म, झण्डै चारकिलो सुन लगाएकि अग्ली नारी साडी उचालेर अध्यारो प्यासेजबाट हिल बजाउदै हिडेको हेरिरहरें। उनको सुरक्षित पार्टी प्यालेस ईन्ट्री कुरेर बसिरहें । ढोकामा पुगेपछि हात हल्लाएर गईन । मैलै मनमनै भनें “ह्यापी तिज” । भरे मदहोशीको फाईदा उठाएर तिम्रा महँगा गहना कसैले नलुटुन । तिमी सधै खुसी रहनु भन्ने कामना गरेँ । ह्यापी तीज सबनम !
एनसेललाई मात्र २२ अर्ब ४४ करोड कर निर्धारण
न्युयोर्कमा पछिल्लो समय काम नगरेर घर बस्नेहरु कोरोना संक्रमित
न्यौपानेको शब्दमा रिमा रिमा
कोरोनाले पर्सामा थप एक मानवीय क्षति, २२ नयाँ संक्रमित भेटिए
उद्धार उडानबाट नेपाल फर्कदा सुन तस्करी
काठमाडौं प्रवेशमा अझ कडाई, संक्रमित बढी भएका जिल्लाबाट पास नपाइने
स्कूल र पठनपाठन थप एक महिना बन्द
हेभेन्ली पाथद्वारा ११ औं दिनसम्म खाना-पानी वितरण
तत्काल नखुल्ने भयो हवाई र लामो दूरीको यातायात
गौतमबुद्धको जन्मस्थलबारे वहस जरुरी छैनः नेपाल
नेपालमा कोरोनाबाट थप दुईजनाको मृत्यु, मृतकको संख्या ७५ पुग्यो
बैंकहरुलाई ‘वर्क फ्रम होम’ को व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडाैं उपत्यकामा ९२ जनामा देखियाे कोरोना
नेपालका राजु नगरकोटीलाई अमेरिकामा स्वर्ण पदक
प्लास्टिकको पार्टेसन च्यातेर यसरी भयो ‘लिफ्ट’ ड्राइभर माथि आक्रमण (भिडियो सहित)
एक लाख नाघ्यो सुनको भाउ
स्पेनका ८२ वर्षिय पूर्वराजाको देश छाड्ने घोषणा
विस्फोटले बेहाल लेवनान (फोटो फिचर)
मेलम्ची पहिरोमा पुरिएका ८ जनाकै निधन, सबैको सनाखत
गैरआवासीय नेपालीले पनि तत्काल अनअराइभल भिसा नपाउने
मलेसियामा सेक्युरिटी गार्डलाई कुट्ने र कुटाइ खाने दुवै नेपाली भएको पुष्टि
भुवनको ‘काली’ बोलको गीत ट्रेण्डिङमा
न्युयोर्कमा ६८ प्रतिशत मानिसमा कोरोना बिरुद्धको एण्टिबडी भेटियो; क्वीन्स सम्भावित दोश्रो छालको न्युन जोखिममा
टेक्सासमा घर झगडाको उजुरी आएपछि घटनास्थल पुगेका दुई प्रहरी अधिकृतको गोली हानी हत्या
अमिताभ बच्चन कोरोना संक्रमित भएपछि अस्पताल भर्ना